.: Ko Moe's Electronics Notes :.: Plogg Energy Logging Device
E-Meter ပါပဲ။ ကျတော် ပထမ သုံးတဲ့အမျိုးအစားပါ။ အရမ်းကို User friendly ဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်က Serial COM သီးသန့်မပါတဲ့အတွက် ZigBEE port မှာ bypass လုပ်ပြီးသုံးရပါတယ်။ ကျတော်သူ့ရဲ့ handshaking ကိုသေချာနားမလည်တဲ့အတွက် reply တွေနောက်ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်တိကျ (ဒဿမ ၄ နေရာအထိ KWh ကိုပြနိုင်ပါတယ်) တဲ့အတွက် ကျတော့် Project တစ်ခုရဲ့ Second Generation အထိ သုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြဿနာတစ်ခုက Ground isolation သေခြာလုပ်ရပါတယ်။ အရမ်းနုပါတယ်။ ကျတော်သုံးနေရင်းကို ၂ လုံးလောက် ရှော့ဖြစ်ပီး ပျက်သွားပါတယ်။ နောက်ပြီး meter firmware upgrade ပါ။ အကုန်လုံးကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်ပနီပေါ်မှီခိုနေရပါတယ်။ သဘောက သူတို့ firmware ပြောင်းရင် ကျတော်က protocol လိုက်ပြောင်းနေရတာပါ။ လုပ်နေရင်းကို ၂ ခါပြောင်းပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ PLC base (RS-485 protocol e-meter) နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသုံးခဲ့ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ IEC standard မရလို့ပါ။ Terric Meter မဟုတ်တဲ့အတွက်ပါ။ သဘောက အိမ်သုံးအတွက် ပဲ အဓိကလုပ်ထားတာကြောင့် ကျတော်သုံးမည့် Project behavior နဲ့ မကိုက်တာပါပဲ။
အောက်က ပုံက သူ့ရဲ့ Full function ကို ပြထားတာပါ။ Bundle လိုက်ဝယ်ပြီး အဆင်သင့်သုံးလို့ရပါတယ်။ ကျတော်က Plogg OEM (Module & ZigBEE) သပ်သပ်ဝယ်ပြီး သုံးခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း Customer က supply လုပ်လို့ သုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ။
Posted by ကိုမိုး at Friday, February 19, 2010
Labels: BlueTooth, Energy Meter, Hardware, Project, Wireless, ZigBEE